January 4, 2021 - Online Hartha
လိုင်းပေါ်မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ အသက် (၇၇) နှစ်ဖိုးဖိုးနဲ့ အသက်(၄၁)မမတို့ရဲ့ ကြည်နူးဖွယ် မင်္ဂလာဆောင်
January 4, 2021 by Online Hartha
အွန်လိုင်းပေါ်မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ အသက်(၇၇) နှစ်ဖိုးဖိုးနဲ့ အသက်(၄၁) မမတို့ရဲ့ ကြည်နူးဖွယ် မင်္ဂလာဆောင် အချစ်ဆိုတာ ကြီးသည် ငယ်သည် အိုသည်ပျိုသည် မရှိဆိုတာ ဒီအဖြစ် အပျက်လေးက သက်သေပြလိုက် သလိုပါပဲ။ ဟုတ်ပါတယ် စစ်ကိုင်းတိုင်း ကသာခရိုင် ကောလင်းမြို့က ထူးခြားတဲ့ မင်္ဂလာပွဲလေး ဖြစ်တဲ့ အသက် ၇၇ နှစ် ဖိုးဖိုးနဲ့ အသက် ၄၁ နှစ် မမတို့ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲလေး ဖြစ်ပါတယ် ။ အဆိုပါ မင်္ဂလာစုံတွဲ ပုံလေးတွေဟာ လည်း လူမှုကွန်ရက်မှာ ရေပန်းစားနေကာ အားကျသူတွေလည်း ရှိကြပါတယ်… အချစ် ဆိုတာထက် ဆေးပေး မီးယူပေါ့လို့ ဆိုရမှာပဲလား အချစ်မှာ မျက်စိမရှိ ဆိုတာပဲလား အသက်နဲ့ ဆိုင်လား မဆိုင်လား ပရိသတ်ကြီးတို့ မှတ်ချက် … Read more
မိဘတှေ မစှမျးခဲ့ပမေယျ့ ဆငျးရဲတဲ့အဖှားအိမျမှာ ကပျနရေငျး (၉)နှဈအရှယျနဲ့ကွကျကွျောဆိုငျပိုငျရှငျဖွဈလာခဲ့သူ
ကလေးအများစုဟာ သူတို့ဖြတ်သန်းရတဲ့ ဘဝအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ အသက် ၉ နှစ်ဆိုတဲ့ အရွယ်ဟာ ကလေးတော်တော်များများအတွက် ကျောင်းသွားမယ်၊ ကစားမယ်၊ အိပ်မယ်၊ စားမယ်ဆိုတာပဲသိသေးတဲ့အရွယ်မျိုးပါ။ သို့ပေမယ့် ထိုင်းနိုင်ငံက Beel ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကတော့ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ချို့တဲ့တဲ့မိသားစုတာဝန်တွေကို ထမ်းရင်းနဲ့ အသက် ၉ နှစ် အရွယ်လေးမှာပဲ ကြက်ကြော်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရဲ့ ပိုင်ရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ Beelကတော့ အခုဆိုရင်အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေမှာလည်း နာမည်ကြီးနေပြီးတော့ လူအများရဲ့ ချီးကျူးမှုကို ခံယူနေရတာပါ။ အကြောင်းကတော့ သူမဟာချစ်စရာကောင်းရုံတင်မကဘဲ အသက် ၉ နှစ်အရွယ်လေးနဲ့ ကြက်ကြော်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကို တွဲဖက်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီ ဖြစ်တာကြောင့်ပါပဲ။ သူမကမိသားစုရဲ့အခက်အခဲတွေကို ဝန်ပေါ့အောင်ကူညီပေးချင်သူဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၃ နှစ်အရွယ်လောက်ကတည်းကနေပြီးတော့ Beel တစ်ယောက် အိမ်မှာနေရင်း အဖွားလုပ်သူကို အိမ်အလုပ်လေးတွေနိုင်သလောက် လုပ်ကိုင်ပေးခဲ့ရတာပါ။ Beel ရဲ့ မိဘတွေဟာ မကြာခင်ကကွာရှင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး Beel … Read more
လမ်းဘေးက ကော်ရှုကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ဘ၀ကို ပြောင်းလဲပေးခဲ့တဲ့ ဆရာမလေး
(ကြယ်ငါးလေးတစ်ကောင်ဖမ်းမိတယ် ဘာဖြစ်ဖြစ် မလွှတ်ပါဘူးကွယ်)ပုံ့ကို ဟိုး အရင်ထဲက သိတဲ့သူဆိုရင် ဒီကလေးတွေကို မှတ်မိကြပါလိမ့်မယ် မသိသေးတဲ့ လူတွေအတွက်ရယ်၊ ပရဟိတလုပ်ချင်လို့ ဘယ်လိုစလုပ်မလဲလို့ မေးတဲ့လူတွေအတွက်ရယ် ပုံ့ သူတို့နဲ့ စတွေ့ဖြစ်ကြပုံလေးကို အကျဉ်းလေး ပြောပြမယ် လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ် ၂၀၁၆ လောက်မှာ ကော်ရှုလေလွင့်နေကြတဲ့ ဒီကလေးတသိုက်နဲ့ ပုံ့ စတွေ့ခဲ့ပါတယ် တွေ့ခဲ့တဲ့ နေရာက ဘယ်မြို့မှာမဆို ဒီလို ကလေးတွေကျက်စားနေကျနေရာဖြစ်တဲ့ ဘူတာပုံ့က အဲ့ချိန်တုံးက ဆရာမလုပ်နေတဲ့အချိန် ညနေ ကျောင်းကပြန်တော့ ဗိုက်ဆာတာနဲ့ ဘူတာမှာ အကင်ဝယ်စားဖြစ်တယ် ပုံ့ အကျင့်က အစားဆို ရတာနဲ့ တန်းစားချင်တာ ဒါနဲ့ ကြက်ကင်ဆိုင်ဘေးက ခုံလေးမှာဘဲ မကျက်သေးတဲ့ အကင်တွေစောင့်ရင်း ကျက်တဲ့အကင်တွေ ထိုင်စားနေလိုက်တယ် ခဏနေတော့ ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ အသက် … Read more
မင်ျဂလာတောငျညှနျ့ တိုကျခနျးမှာ သရဲထကျဆိုးတဲ့သူ ရှိနပေါပွီ (အရမျးအန်တရာယျရှိပါတယျ)
မင်္ဂလာတောင်ညွန့် တိုက်ခန်းမှာ သရဲထက်ဆိုးတဲ့ သူ ရှိနေပါပြီ (အရမ်းအန္တရာယ် ရှိပါတယ်) ကျွန်မ နေတဲ့ တိုက်မှာ စိတ်ရောဂါသည် တစ်ယောက် ရှိ နေပါတယ်။ တစ်နေ့တစ်နေ့ ပိုပို ဆိုး ဆိုး လာ ပါ ပြီ ည ဘက် တွေ လည်း မအိပ်ရဘူး တစ်ဒုန်းဒုန်း နဲ့ တိုက်ပေါ် က ရေတွေ လည်း လောင်းချ ဒုတ်တွေ လည်း ပစ်ချ တစ်တိုက် လုံး စိတ်ညစ်ရတာပါ ဘယ်သူမှ လည်း လာ မခေါ် ပေးကြဘူး ရပ်ကွက်ရော ရဲစခန်းရော ဖုန်း တွေ ဆက် ပါတယ် ဘာမှ မတတ် နိုင် ပါ ဘူး … Read more
အပျိုလေးနီးပါးဖြစ်စေဖို့ – အိမ်ထာင်သည်အမျိုးသမီးများသာဖတ်ပါ
အပျိုလေးနီးပါးဖြစ်စေဖို့ – အိမ်ထာင်သည်အမျိုးသမီးများသာဖတ်ပါ… ပျိုပျို အိုအို အချိန်တန်ရင် ကြွက်သားတွေက ရွဲလာမှာပဲ အပေါ်တင်မကဘူး အောက်လည်းရွဲတယ် ..ယောက်ျားကို ချစ်တဲ့သူတွေက သူတို့ရဲ့ အပေါ်အောက် အသားအရည်အထိအတွေ့ကို အရမ်းဂရုစိုက်ကြတယ် ကျေးဇူးဆပ်ချင်တာကိုး။ အရင်ခေတ်ကဆို သူတို့ အောက်ပိုင်းလေးကို plastic surgery လုပ်ကြတယ် …ကုသချိန်က တစ်နာရီကနေ နှစ်နာရီကြာတဲ့အပြင် မေ့ဆေးပေးရသေးတာ ပြီးရင် အောက်ပိုင်းလေး အနာကျက်ဖို့ တလခွဲ ကျားကျားကို အငတ်ထားရသေးတာလေ ဒါ့ပြင် သွေးထွက်တာ ယောင်ယမ်းတာ နာကျင်တာ ဖြစ်သေးတာ သူကောင်းကျိုးက မိန်းမကိုယ်ကျဉ်းစေတယ်။ နောက်တော့ Laser လေဆာကုထုံးတွေပေါ်လာရော သူကတော့ ကုသချိန် တစ်နာရီပဲ ကြာတယ် မေ့ဆေးကတော့ ပေးရတုန်းပဲရှင် ပြသနာက သုံးလေးကြိမ် သွားလုပ်နေရတယ် တခါကုပြီးနိုင်း ကျားကျားခမျာ တစ်ပတ်ကနေ … Read more
ကလေးငယ်များ အတွက် အကောင်းဆုံး အဟာရဖြည့်စွတ်စာ…
ခြောက်လအထက်ကလေးငယ်တွေ ကိုဖြည့်စွက်စာစကျွေးတော့မယ် ဆိုရင် ဘာတွေထည့်ကျွေးသင့်သလဲ ဒီနေ့တော့ ကလေး တွေ ကိုနေ့လည်စာ နှင့် ညစာ ဆန်ပြုတ်ကျွေးဖို့ အတွက် ပါဝင် ပစ္စည်းများ နှင့် ပြုလုပ်ပုံ အဆင့်ဆင့် ကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ပြုလုပ်ပုံ 1. ကြက်သား (သို့) ငါး ကိုပြုတ်ပါ။ 2. ပဲထည့်ပြုတ်ပါ။ 3. ပဲနူးလာပြီ ဆိုရင် ကျန်တဲ့ ပစ္စည်းများ ကို ထည့်ပြီး ပြုတ်ပါ။ 4. ဆား၊ အချိုမှုန့် လုံးဝ ထည့်စရာမလိုပါဘူး။ 5. နူးပြီး ပြဲနေအောင် ပြုတ်ပေးပါ။ 6. အိမ်မှာ ကြိတ်စက်ရှိရင် အခုပြဲနေအောင် ပြုတ်ထားတာတွေ ကို ကြိတ်စက်ထဲ ထည့်ကြိတ်ပါ။ (အသက် ၉ လကျော်ရင် … Read more
စာသားတွေ အရမ်း‌ကောင်းလို့ မျှဝေပေးတာပါ… လင်မယားကိစ္စတွေကို ဝင်မပါပါနဲ့.. သားနဲ့ တီးတိုးပြောဆိုတာဟာ ချွေးမဖြစ်သူကို စိတ်ဆင်းရဲစေတယ်ဆိုတာ သိထားပါ. . . သားဖြစ်သူဆီက တောင်းစရာရှိရင် ချွေးမအရှေ့မှာ တောင်းပါ… မိသားစုကိစ္စတွေမှာ ချွေးမဖြစ်သူရဲ့အကြံဉာဏ်မလိုအပ်ဘူးဆိုရင်တောင် အသိပေးပါ . . . သူလဲ မိသားစုဝင်လို ခံစားနားလည်ပါစေ . .သားဖြစ်သူ မှားမှားမှန်မှန် ချွေးမဘက်က ရပ်တည်ပေးပါ. . ချွေးမ မှားနေခဲ့ရင် ဆူဆဲအော်ဟစ်ပြီး လင်မယားချင်းရန်တိုက်ပေးမယ့်အစား သမီးတယောက်လို ဆုံးမအကြံဉာဏ်ပေးပါ . . ချွေးမဖြစ်သူရဲ့ ခံစားချက်တွေကို နားလည်ပေးပါ . . . အပြန်အလှန် ယုံကြည်မှုရအောင် စာနာနားလည်ပေးပါ .ကိုယ်ဝန်ဆောင် ချွေးမကို ဂရုစိုက်ပေးပါ . . .ချိုသာပြီးအေးဆေးတဲ့ လေသံနဲ့ … Read more
ပါဝင်ပစ္စည်း သိပ်မပါပဲ အမှန်တကယ်ထိရောက်တဲ့ Coffee scrubပြုလုပ်နည်း
Coffee scrub လုပ်နည်း ပါဝင်ပစ္စည်းသိပ်မပါပဲ အမှန်တကယ်ထိရောက်တဲ့အပြင် အရမ်းလွယ်တဲ့ အိမ်တွင်း skin care နည်းလေးပါ… နည်းလမ်းလေးမလာခင် Coffee ရဲ့ အာနိသင်အစွမ်းတွေကို အရင်ဆုံးပြောပြပေးမယ်လေနော်… ဘာအတွက် သုံးသင့်တာလဲဆိုတာကိုသိတော့ ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့ လေ့လာရသလောက် Coffee မှုန့်မှာ အသက်အရွယ်အလိုက် အသားအရေပျက်စီးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ အစွမ်းရှိပါတယ်တဲ့နော်… နေလောင်ဒဏ်၊ အရေပြားပေါ်က အမဲစက်၊ ဆားဝက်ခြံနှင့် cells အသေတွေကိုလည်း ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ် အသားအရည်ကို ကြည်လင်နုပျိုစေပြီး မိတ်ကပ်မပါပဲ grow စေဖို့ အကူအညီပေးတယ်လို့ သိရပါတယ် ကဲ….ဒါဆို စလိုက်ရအောင်နော် ပါဝင်ပစ္စည်း ကော်ဖီအမှုန့် (pure coffee) – 1 tbsp သကြား – 1 tbsp သံလွင်ဆီ (သို့) အုန်းဆီ … Read more
အိမ်မှုကိစ္စ လုံးဝမလုပ်တတ်တဲ့ ကျွန်တော်နဲ့သားလေးကို ထားခဲ့တဲ့ ဇနီးရဲ့ စိတ်မကောင်းစရာအဖြစ်အပျက်…
အိမ်မှုကိစ္စ လုံးဝမလုပ်တတ်တဲ့ ကျွန်တော် နဲ့ သားလေးကို ထားခဲ့တဲ့ ဇနီးရဲ့ စိတ်မကောင်းစရာအဖြစ်… ကျွန်တော့ ဇနီး မှဲ့ကင်ဆာ ဖြစ်ပြီး ကျွန်တော် တို့ဆီကနေ ထွက်ခွာသွားတာ ၂ နှစ်ရှိပါပြီ။ ကျွန်တော် ပြန်စဉ်းစားမိတယ်… အိမ်မှုကိစ္စလုံးဝမလုပ်တတ်တဲ့ ကျွန်တော် နဲ့ သားလေး ကို ထားခဲ့ ရတာ သူဘယ်လောက်ထိ ၀မ်းနည်းလိမ့်မလဲ။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လဲ မိဘ ၂ယောက်စလုံးရဲ့ ဇာတ်ကောင် နေရာကနေကောင်းကောင်း မလုပ်နိုင်တဲ့ အတွက် ကိုယ့် ကိုယ်ကို အားမလို အားမရ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။တနေ့မှာ ကျွန်တော် အလုပ် ကိစ္စနဲ့ မနက်စောစော ခရီးထွက်ဖို့ရှိတော့ ကလေး အတွက် ဘာမှ မပြင်ဆင်ပေးခဲ့ ရဘဲ က မန်းကတန်းထွက်လာခဲ့တယ်။ မနေ့က ထမင်းအေးနဲ့ … Read more
တစ်ခုခုစားတိုင်း နံနံပင်မထည့်နဲ့ ပူစီနံမထည့်နဲ့ ပင်စိမ်းမထည့်နဲ့ ဆိုတဲ့သူတွေ ဒီစာလေးဖတ်ကြည့်ပါ
တစ်ခုခုစားတိုင်း နံနံပင်မထည့်နဲ့ ပူစီနံမထည့်နဲ့ ပင်စိမ်းမထည့်နဲ့ ဆိုတဲ့သူတွေ ဒီစာလေးဖတ်ကြည့်ပါ… မင်္ဂလာပါ စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ယခုတစ်ခါမှာတော့ အစားအစာတွေမှာ ဟင်းခာတ်အမွှေးအကြိုင်အဖြစ် အမြဲလိုလိုတွဲပါတတ်တဲ့ နံနံပင် ပင်စိမ်း ပူစီနံတို့ရဲ့ ကောင်းကျိုးတွေကို ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ နံနံပင် ပင်စိမ်း ပူစီနံသုံးမျိုးလုံး မစားတဲ့သူတွေရှိကြလား။ သုံးမျိုးလုံးစားတဲ့သူကတော့ ရှားမယ်ထင်ပါတယ်။ အနည်းဆုံး တစ်မျိုးကိုတော့ စားသင့်ပါတယ် ကျန်းမာရေးအတွက်အရမ်းအကျိုးပြုတဲ့ အရွက်လေးတွေဖြစ်နေလို့ပါ ကောင်းကျိုးလေးတွေ အောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ နံနံပင် နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့ အမျှင်ဓာတ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ သံဓာတ်နဲ့ မဂ္ဂနိစ်ဓာတ်တွေနံနံပင်မှာ အံ့သြသင့်လောက်အောင် ပါဝင်နေပါတယ်။ အစာခြေအားကောင်းအောင် အကောင်းဆုံး ပံ့ပိုးပေးနိုင်သလို အသည်း လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုပါ ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ နံနံပင်က ဆီးချိုသမားတွေ လက်စွဲထားသင့်တဲ့ အရွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်တွင်း အင်ဆူလင်ဓာတ်ထွက်အောင် လှုံ့ဆော်ပေးပြီး သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို လျော့ချပေးပါတယ်။ နံနံပင်မှာပါဝင်တဲ့ ဗီတာမင်ကေက အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ … Read more